लकडाउनका कारण खोप लगाउन नपाएका शिशुलाई के गर्ने? – Ishan Hospital
लकडाउनका कारण खोप लगाउन नपाएका शिशुलाई के गर्ने?
आरपी चौधरी सिनियर पेडियाट्रिक सर्जन ईशान महिला तथा बाल अस्पताल । काठमाडौँ – कोभिड-१९ का कारण हाल विश्वमा नै असामान्य स्थितिको सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसारभर नै अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने कतिपय कार्यहरु समेत पुर्ण हुन नसकेकोे अवस्था हामीमाझ यथावत् नै छ । नेपाल पनि हाल यसै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशमध्ये एक हो । यसैगरी यस परिस्थितिको प्रभाव शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै परेको छ । सामान्यतयाः कुनै पनि शिशु जन्मिएपश्चात् पन्ध्र महिनाको अवधिभित्र अनिवार्य रुपमा उनलाई १२ वटासम्म खोप दिनुपर्दछ । खोपको माध्यमबाट स्वस्थ्य रहि शिशुमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । यस अर्थमा भन्ने हो भने निश्चित अवधिमा लगाइनुपर्ने प्रत्येक खोपले शिशुको स्वास्थ्यमा विशेष महत्व राख्दछ । त्यसैले प्रत्येक शिशुलाई अनिवार्य रुपमा खोपको पुर्ण मात्रा दिइनु पर्दछ । तर, हाल ‘कोभिड-१९’को महामारी फैलिएसँगै सम्पूर्ण देश नै लकडाउनका कारण प्रभावित बनेकोले अधिकांश अस्पतालले आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सेवाहरु अनिश्चित अवधिको लागि बन्द गरेको छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यो अधिकांश अभिभावकको जिज्ञासा एवं चिन्ताको विषय हुन सक्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने खोप लगाउन पर्ने निश्चित समयभन्दा केहि समय पर गएमा अथवा तोकिएको समयमा शिशुलाई खोप लगाउन असम्भव हुँदा केहि पछि धकेलिएको खण्डमा त्यसले शिशुमा खासै केहि नकरात्मक प्रभाव पार्दैन । तर, हामी के कुरामा निश्चित हुनुपर्छ भने समयमा नै लगाउन नपाइएका खोपहरु शिशुलाई उपयुक्त समय मिलाएर पछि क्रमिक तथा अनिवार्य रुपमा दिइनुपर्छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा, ६ हप्ताको उमेरमा लगाउनुपर्ने खोप शिशुमा लकडाउनका कारण केहि ढिलो भएतापनि पछि खोप दिन सुरु गरेदेखि आवश्यक तथा निश्चित समयको ग्यापपछि अन्य खोपहरु क्रमिक रुपमा दिइनु पर्छ । र, शिशुको निम्ति यो अत्यावश्यक पनि छ । विकल्प देशमा जारी भएको यस लकडाउन अनिश्चित भएकाले यो अझ लामो समयसम्म लम्बिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा शिशुमा खोप लगाउनमा धेरै ढिलो हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले गर्दा शिशुमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । तसर्थ शिशुमा यस्तो समस्या देखा नपरोस् भन्नका निम्ति त्यस्तो समयमा भने हामीले विकल्पको रुपमा अन्य उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति प्रत्येक अभिभावकले आफ्ना समस्याबारे सम्बन्धित अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । हामीले अस्पतालको तर्फबाट केसम्म प्रयास गर्न सकिन्छ, भने खोप लगाउन बाँकी भएका प्रत्येक शिशुका अभिभावकका सम्पर्क नम्बर लिने र शिशुको खोपको समय आएपछि अस्पतालमा भीडभाड नहोस् भन्नका लागि उचित समयतालिका मिलाएर एक एक गर्दै अभिभावकलाई खोपको निम्ति अस्पताल आउन जानकारी दिन सकिन्छ । यस्तै, अभिभावकले पनि आफ्ना शिशुको खोपको समय आएपछि सम्बन्धित अस्पतालाई सम्पर्क गरी उपयुक्त समय मिलाएर शिशु लिएर खोपको निम्ति अस्पताल जान पनि सकिन्छ । यसबाट शिशु सुरक्षित रहन्छ नै सँगै समयमै खोप लगाउनबाट कुनै शिशु पनि वञ्चित हुँदैन । सरकारी अस्पतालहरुमा सम्भव नभएतापनि केहि समययता हामी ईशान अस्पताल परिवारले पनि यसै विधिलाई अपनाइरहेका छौं । हामीले यहाँबाट सेवा लिने प्रत्येक अभिभावका सम्पर्क नम्बर लिएका छौ । उपयुक्त समय तालिका हेरेर अभिभावकलाई खोपका निम्ति आफ्ना शिशु ल्याउन आग्रह गरिरहेका छौ । र, यसरी हामीले खोपका सेवाहरु प्रदान गरिराखेका पनि छौ । यसका साथै लकडाउन लामो समयसम्म लम्बिएको खण्डमा अभिभावक तथा अस्पतालले मात्र नभई सरकारले यस विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ । प्रस्तुतिः सृजना मगर
थप पढनुहोस: https://www.healthaawaj.com/primary-health/13521/?fbclid=IwAR2yZsXDSRDwsPQlAMYqRCyFRAeQe2Qf5nwfzApr79UbHHwJOg2qiJ671_4